हाम्राे पिपलबाेट » मेरो उम्मेदारी उद्योगी व्यापारीहरुको हकहितका लागि हो :अध्यक्ष पदका उम्मेदार खनाल मेरो उम्मेदारी उद्योगी व्यापारीहरुको हकहितका लागि हो :अध्यक्ष पदका उम्मेदार खनाल – हाम्राे पिपलबाेट
मेरो उम्मेदारी उद्योगी व्यापारीहरुको हकहितका लागि हो :अध्यक्ष पदका उम्मेदार खनाल
बाँकेको कोहलपुरमा फागुन २०७७ फागुन २७ गते शनिवार उद्योग वाणिज्य संघ कोहलपुरको नयाँ कार्यसमिती चयन हुनेछ । जसका लागि समावेश साझा व्यानलबाट अध्यक्ष पदका लागि विष्णु खनाललाई अध्यक्ष पदका लागि अगाडी सारिएको छ । लामो समयदेखी कोहलपुरमा बसोबास गर्दै आएका र कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना कालदेखी नै संघको विभिन्न पदमा रहेर जिम्मेवारी समालिरहेका खनाल अहिले संघको चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।उद्योग वाणिज्य संघको विभिन्न पदमा रहेर उद्योगी व्ययवसायीहरुको हकहितका लागि निरन्तर योगदान पु¥याएका तिनै अध्यक्ष पदका उम्मेदार खनाल संग हाम्रा पीपलबोट दैनिकका रिर्पोटर स्याम विष्टलेगरेको कुराकानी सक्षिप्तमा :
नमस्कार म विष्णु खनाल । मेरो स्थायी ठेगाना कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. ११ बाँके विगत लामो समयदेखी कोहलपुर क्षेत्रको विकास समृद्धि र उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहितका लागि निरन्तर योगदान पु¥याउदै आएको छु । कोहलपुर ११ मा व्यापार व्यवसाय संचालन पनि गर्दै आइरहेको छु ।
कोहलपुरमा तपाई व्यवसाय संचालन गरेको कति वर्ष भयो ?
२०५० सालदेखी कोहलपुरमा किनारा तथा जनरल स्टोर्स संचालन गरेको थिए । पछि विस्तारै २०५५ सालमा औषधी व्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । जतिबेला अहिलेको जस्तो व्यापार व्यवसाय थिएन् र बजार पनि यसरी व्यवस्थापन भएको थिएन् । औषधी व्यवसाय संचालन गरेको झण्डै २७ वर्ष पुरा भएको छ ।
कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघमा अध्यक्ष पदको उम्मेदार दिने तयार तयारीमा जुटिरहनुभएको छ ? तपाईका खास निर्वाचनका मुद्धाहरु के हुन ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना कालदेखी नै म निरन्तर सेवामा छु । उद्योग वाणिज्य संघको महाससचिव पदमा रहेर पनी सेवा गर्ने मौका मिलेको थियो । समय समयमा सल्लाकारको पदमा रहेर पनी काम गर्ने मौका मिल्यो अहिले म अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदारी दिने तयारीमा छु । सायद मेरो
उम्मेदारी अन्तिम पटक हो । कोहलपुरका उद्योगी व्यवसायीहरु मेरा भगमान हुन म चुनावमा बिजय हुँ वा पराजय हुँ मैले सधै उद्योगी व्यवसायीहरुको हकहित र उनीहरुका समस्यालाई समधान गर्ने बाटोमा लागिरहनेछु । यदपी मेरो चुनावी मुद्धा भनेको नै साना तथा मझौला व्यवसायीहरु अहिले पनी मर्कामा छन् । उनीहरुलाई सहुलियत कर्जा, व्यापार व्यवसायीहरु साझा एजेन्टाहरुलाई समाधान गर्ने र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट पाउनुपर्ने हरेक सेवा सुविद्याका बारेमा मेरा बुलन्द आवाज उठाउने नै हो । । हामीले थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । हाल बन्दै गरेको उद्योग वाणिज्य संघको भवनलाई पूरा गर्ने लक्ष्य पनीरहेको छ । कोहलपुरलाई हरित कोहलपुर बनाउन विशेष भुमिका हामीले खेल्नेछौँ । एकातर्फ कोहलपुरका उद्योगी व्यवसायीहरुको थुप्रै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरु समाधान गर्न र उद्योगी व्यसायीहरुको जायज मागहरुलाई पुरा गर्न मेरो उम्मेदारी हुनेछ ।
गुठ र उपगुठ बनाएर व्यवसायीहरुको समस्या समाधान हुन्छ ?
यो स्वभाविक प्रक्रिया हो । सबैले आफ्नो आफ्नो उम्मेदारी दिन पाउने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने स्वभाभिक हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरुले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने पदिय दायित्वमा पुगेपछी हाम्रा समस्याहरु कस्ले समाधान गर्न सक्छ भन्ने मुल प्रश्न हो ,यसमा सबै उद्योगी व्यापारीहरुले प्रष्ट रुपमा उम्मेदारीको क्षमता,योग्यता बुझनुभएको छ भन्ने हो यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।उद्योग व्यवसायीहरुको हकहितका लागि उम्मेदारहरुको अनुभव कार्यक्षमता लगायत विषयहरुमा उद्योगी व्यापारीहरु प्रष्ट हुनुहुन्छ ।
जुनसुकै प्यानलका उम्मेदारहरुले विजय भइसकेपछी आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्छन भन्ने आरोप छ नी ?
प्रश्नका लागि धन्यवाद । हामी जुन जुन पटक कार्य समितीमा जिम्मेवारी समालेका छौँ सो खबतमा हामीले कोहलपुर नगर विकास समिती, यहाँ राजनैतिक दल कोहलपुर नगरपालिका र विभिन्न संघ संस्था , समाजसेवी, बुद्धिजिवी वर्गहरु उद्योगी व्यापारीहरुको राय सुझावबाट नै अगाडी बढेका छौँ । कानुन निती नियमको पालना गर्दै हाम्रो विकेकले भ्याएसम्म काम गरिरहेका छौँ । आरोप प्रत्यारोप आउछ काम गर्ने शिलसिलामा कमिकमजोरी हुँदैन भन्ने हैन तरसकरात्मक पाटोबाट पनी त हेर्नुप¥यो नि ।
उद्योगी व्यवासायीहरु व्यवसाय संचालन गर्न चर्को व्याजदरमा अहिले पनि कारोवार गरिरहेका छन् तर तपाईहरुको ध्यान त त्यता कहिल्लै गएन् ?
यो उद्योगी व्यापारीको प्रमुख समस्या नै हो । सरकारले बनाएको निति नियममा हामी पनी बाधिन् बाध्य छौँ । यो समस्या पहिले पनी थियो अहिले पनी थियो । जिम्मेवारी पदमा नहुँदा समस्या भएको हो । आगामी दिनमा यस विषयको समधानका लागि म हिजो पनी लागि परेको हो, अझैपनी समस्यालाई समधानको बाटोमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु । भोलीका दिनमा यस विषयलाई गम्भिर रुपमा उठाउने छौँ ।
कोहललपुर क्षेत्रमा अझैपनी उद्योग व्यवसायहरु दर्ता नै नगरी संचालन भइरहेका छन् भन्ने गुनासाहरु आइरहन्छ यस विषयमा तपाईको धारणा के हो ?
कोहलपुरमा रहेका सबै उद्योगी व्यवसायीहरु दर्ता, नविकरणका लागी हामीले बारम्बार व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएका छौँ । यसको कार्य निरन्तर भइरहेको छ । हामीले यस विषयलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ भने समय समयमा उद्योगी व्यवसायीहरुको घरेलु र भ्याट सम्वन्धीको राजश्व संकलन सम्वन्धी उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमै सेवाग्राहीले बुझाउने सहज वातावरण सिर्जना भएको थियो । अर्को विषय व्यापार व्यवसायहरु कतिपय दर्ता हुन छुटेका पनी होलान् कतिपय नयाँ व्यवसायहरु जानकारी नभएको पनी होला । हामीले सकेसम्म व्यापार व्यवसाय दर्ता गरेर नै संचालन गर्न अनुरोध पनी गरेका छौँ । अहिले त झनै व्यापार व्यवसाय दर्ता नै
नगरी कारोबारो गर्न कठिन छ त्यसैले व्यापार व्यवसाय दर्ता गर्न बाँकी रहनुभएका महानुभावहरुलाई सूचना जारी पनी भएको छ ।
उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव नजिकिदै गर्दा घरदैलो अभियान शुरु गर्नुभएको छ प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
प्रश्नका लागि फेरी पनि धन्यवाद साझा समावेशी प्यानलबाट सर्वसहमतमा अध्यक्ष पदमा मलाई अगाडी सारिएकोले अहिले घरदैलो अभियान जारी छ । उद्योगी व्यापारीहरुले आफ्ना समस्याहरु खुलस्त राख्नुहुन्छ सकरात्मक सुझाब र सहयोगको लागि तयार भएको कुरा उद्योगी व्यापारीहरुबाट आएको छ ।
अन्तमा हामी उद्योगी व्यापारीहरुले व्यवसाय दर्ता गरि संचालन गरौँ समयमै आफ्ना व्यवसाय उद्योग नविकरण गरौँ । राष्ट्र निर्माणमा उद्योगी व्यापारीहरुको महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ । उद्योगी व्यापारीहरुले आफ्नो इमान्दारिताको परिचय दिऊ । क्षमता ,इमान्दारिता, योग्यताको कदर गरौ । आगामी फागुन २२ गते हुने भनिएको कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष पद लगायत सम्पूर्ण प्यानलका पदाधिकारी हरुलाई अध्याधिक बहुमतले बिजय गराउनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छ । सम्पूर्ण उद्योगी व्यापारी व्यवसायी मित्रहरुले मलाई पूर्ण सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छ । मेरो अन्तिम उम्मेदारी भएकाले आफ्नो अमुल्य मतलाई प्रयोग गरिदिनुहुनेछ ।
२५ माघ २०७७ मा प्रकाशित